Article submitted by: minkyaw thuyein on 7-Oct-2013
ကြောင်တောင် ကန်းနေလျှော့သလား ? ( ၂ )
မနေ.က အဆက် ။
မစုကြည် ကြောင်တောင်ကန်း နေလျှော့သလား ? ( ၂ )
တံခါးဖွင် ဈေးကွက်ပေါ်အခြေခံ စီးပွားရေး လောကမှာ ဆောင်ပုဒ်ကိုက You have to speculate to accumulate လို.ဆိုထားတော့၊ ငွေကစားတယ် ဈေးကစားတယ် ဆိုတာ သာမန်လုပ်ရပ် ကျုင့်စဉ်တခုဘဲ Business is business, Business has no friends. ဆိုတာတွေကလဲ ရှိသေးတယ် ၊ Price control board or price commission, monopoly commission , ombudsman ဆိုတာတွေဟာ မလိုလားအပ် တဲ့ အဖွဲ.တွေ ၊ ဌာနတွေ မဟုတ်ဘူး ၊ ဗဟို ဦးစီးချုပ်ကိုင်မှု သက်သက်တွေလို. မှတ်ယူရင် မှားမယ် ၊ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်အတွက် အန္တရာယ်တွေ ထိမ်းဘို.သိမ်းဘို. အထိမ်း
အသိမ်းမရှိရင် ဘာမှ မကောင်း ဘူး ။ မြန်မာမှာ စီးတဲ့ရေ ဆယ်တဲ့ကဇင်း ဆိုတာဟာ။ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဘို. ပြောတာလို.မှတ်ယူတယ် ။
စီးပွားရေးကို စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်တတ်လာပြီ လို. ပြောမလား ? မြန်မာ
နိုင်ငံမှာ ခေါင်းရွက်ဗြတ်ထိုး ဈေးသယ်တွေတောင် ဈေးစစ်လို.မရတော့ဘူး။ ကြိုက်ဈေးနဲ. ရောင်းနေတယ် ဈေးကြိုက်ရင် ပစ္စည်းကြိုက်တာမကြိုက်တာက နောက်မှ။ ယူရင် ယူ မကြိုက်ရင် နေ ဒါဘဲ တဲ့ ၊ မာမာဘဲ၊၊ မုန့်ဟင်းခါဟင်းရည်
တောင် “ အရေလေးနဲနဲပေးပါ အုံး”လို. ရင်ကလို အလကား အခမဲ့ တောင်းလို. မရတော့ဘူး။ မုန်.ဟင်းခါး တပုဂံ ကြက်ဥ အကျော် ပါ ၅၀၀ိ/ အပြားမှ မလျှော့ဘူး။
အ၀စား ကုလားထမင်းဆိုင်တွေ ဗမာထမင်းဆိုင် တွေ ၊ ပျော်ပွဲစားရုံတွေ ဟော်တယ်တွေက ကောင်းပေ့ ဆိုတဲ့ လက်ရွေးစဉ် ကြက်ဌက် သားငါးတွေ ကြုံးဝယ်နေကြတော့ သားငါး ပုဇွန် တချို.ကို နိုင်ငံခြား ငွေရဘို.နိုင်ငံခြားတင်
ပို.နေတာ၊၊ ကျန်တဲ့ စားသုံးသူတွေ လဲ ပေးနိုင်ရင် ရမယ်လေ ၊ မရောင်းရလဲ အခြောက်လှမ်း ငါးပိ သိပ်လိုက်မယ် ၊ နောက် တဈေးပေါ့။
နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်း တွေ တင် သွင်းရတာ ။ ခေတ်မီလိုသူတွေက သနပ်ခါး မကြိုက်တော့ နောက်ဆုံးပေါ် မိတ်ကပ်နဲ့ Sun Cream တွေ ၊နှုတ်ခန်းဆိုးဆေး
တွေ မသုံးရရင် သေပါတော့မယ် ဆိုလို နိုင်ငံခြားဖြစ်မှ သုံးခြင်ပါတယ် ဆိုလို. တင်သွင်းပေးရလို.နိုင်ငံခြား ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာ မဆန်ူး ပါဘူး။ပြည်တွင်း
ဖြစ်တွေ ကလဲ ဈေးနှုန်းအမီ လိုက်ကြပါတယ် ။ မြို.က လူတွေ မ၀ယ်ရင် တောကသူတွေကိုရောင်းနိ်ုင်ပါသေး လှောင်ထားရတဲ့ ရက်တွေအတွက် အပွန်းအပပဲ့ တွေအတွက် ဈေးတင်ရသေးတာမို. ဈေးချဘို.တော မပြောနဲ့ ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်တော့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ်.သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မမှူပါဘူး ၊ ရေမြင့် လေ ကြာမြင့်အစားအသောက် အ၀တ
်အထည် ၊ အိမ်ယာပစ္စည်းရောင်းလိုကတေ့ာ စီးပွားမဖြစ်မရှိပါဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်သူ
တွေ များလာရင်. တယောက်နဲ့တယောက် စီးပွားသတ်သလိုဖြစ်ပြီး
။ ၂ ယောက်စလုံး အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
လူငယ်တွေအတွက် နိုင်ငံမှာ အလုပ်မျိုးစုံ တပုံကြီးပါ ၊မိန်းခလေးတွေများ
ဆိုရင် နေယအလုက် ညဉ့်အလုပ် အလုက်စုံပါတယ် ပိုများပါတယ် ၊ ခေတ်မီစွာနေထိုင် သုံး စွဲနိုင်တယ် ။ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပြိုင်ပြီး ဘီယာဂါဒင
်နဲ့ ညဉ့်ကလပ် တွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး လွတ်လပ်နေကြပါတယ် သောက်ပွဲ ၊ မှောက်ပွဲ နဲ. မြောက်ပွဲတွေ ခင်းနေတာကလဲ မရှားပါဘူး။
ဒီနေရာတွေကို တခါတခေါက် ရောက်ဘူးအောင် မစုကြည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်
ကျသွာြး့ပီး ၀ိုင် တပုလင်း လောက်မော့ပြီး လေ့လာရင် အဆင့် အတန်းတို. တိုးတက်မှု ဖွံ့ဖြိုးမှုတို.ကို သိလာမြင်လာ နားလည်လာပါ လိမ်.မယ် ၊ သတိ
တော့ထားပေါ့နော် ဒီအဖွားကြိး ဘာလာရှုတ်လဲ ဆိုပြီးပုလင်း နဲ့လိုက်လို.
ပြေးပေါက်မှားနေ အုံး မယ် ။ ကနောင်မင်းလို လွှတ်တော် အဆင်းမှာ ခါးပုံစ နင်းမိလို. ကံကုန်သလိုတော့ ထမီစ မနင်းမိစေနဲ့ ပေါ့ ။
ဘယ်သူကို အပစ်တင်ခြင်သေးသလဲ ၊ မနေ.တနေ.ကဘဲပြောမိသေးတယ် သောင်းကျန်ူးသူ အမျိုးမျိုးထဲမှာ စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူတွေ ဟာ အဆိုး ဆုံးဘဲ လို.။ တကယ်တော့ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ သုံးသူရော ဖြုန်း သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ် ။ အားလုံးမှာတာဝန်ရှီတယ် ။ ဒါတွေဟာ အရင်က မရှိဘူး. ဆုတ်ယုတ်မှုလား တိုးတက်မှုလား မစုကြည်ဘဲ ပြောပေတော့ ။ မြန်မာတွေ
ဟာ နေ.စဉ် ရွှေဥ တလုံးကျ ဥတဲ့ ရွှေငန်းကို တမနက်ထဲ သတ်စား ကြ အုံးမလို.လား?
ပြည်ပမှာနေပြီး ပြည်တွင်းကို မကြာခဏ -၀င်ထွက်သွားလာရင် ဈေးနှုန်း တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ ၊ ဒို.ဆီက ဈေးနှုန်းတွေ ဟာ ပြင်ပက ဈေးနုန်း တွေထက် မြင့်နေတာတွေကို အများကြီးတွေ.ရတာတော့ အမှန်ဘဲ ။ စားသုံး သူတွေမှာလဲ ကွဲပြားမှုတွေကတော့ ရှိတာပေါ.။ မရှိမဖြစ် ဆိုတာ မြန်မာလို နိုင်ငံမှာ ဘာဆိုတာ လူတွေသိဘို. လိုအပ်တယ် ၊ သူမှာရှိရင် ငါ့မှာလဲ ရှိရ မယ် ဆိုတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်စိတ် ကတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူး။ မလိုရင် မသုံးဘူးဘဲ ဖြစ်ရမယ်။. လိုရမယ်ရ အိတ်ဆောင်ထားတာတောင် လွန်လှပြီ လို.ပြောခြင်တယ် သူတပါးအမှန်တယ်လိုအပ်တာမရရင် ကိုယ့်တာဝန်သာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မရှိရင်မဖြစ်ဘူး သေတော့မယ်ဆိုရင်လဲ လဲသာ သေလိုက်ကြ
မြန်မာမှုမှာ “သူ.အိုးနဲ့ သူ.ဆန် တန်ရာဘဲ “ တဲ့၊ တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတာ
တွေကလဲ ရှိသေးတယ် ။ ညောင်သီးလဲစား မျှားသံလဲနား ထောင် ဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက်ဘို. လိုအပ်တယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ တည် ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီ အတော်ကြာပါပြီ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်းတွေမက၊ လူမျိုးခြား တွေ ကိုယ်တိုင်နှစ် ၁၀၀ ကျော် စံနစ်ချ အုပ် ချုပ်သွားကြတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး အခြေခံ အဆောက် အအုံ ( Infra structure) မရှိဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပြောတာဟာ မမှန်နိုင်ဘူး ၊ လက်မခံနိုင်ဘူး ။
တခုတော့ရှိတယ် “ အစိုးရအဖွဲ. ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာအလုပ်လုပ် ရတာနှေးကွေးတယ် ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ် ၊ ကိုဆံတို ပြောသွားတဲ့ မစုကြည်ရဲ ခရိုနီတွေကို ဦးစားမပေးလို.များလား ဆိုတာ ကတော့ စဉ်းစားစရာဘဲ ။ ပြောရရင်တော့ အမှုထမ်းတွေဟာ သူဌာနနဲသူ လုပ်စရာရှိတာတွေကို လက်မ
လယ် နိုင်အောင်လုပ်နေကြတာပါ။ အပစ်ဖြစ်မှာကိုလဲ ကြောက်ကြ လွန်းလို.၊ ကျားလဲကြောက်ပါတယ် ကျားချီးလဲကြောက်ကြပါတယ် တဲ့၊ ဒါကို ကိုယ် နေရာနဲ့ ကိုယ်မနေဘဲ ဟိုဝင်စွံက် ဒီဝင်စွက်နဲ.၀င်သြဇာ ပေးတာတွေ ဟာ စည်းကျော်တာတွေဘဲ ၊ မဖြစ်သင့်ဘူး ၊ ကိုယ်ရတဲ့ သတင်းအချက် အလက်
တွေကို အထောက်အထားတွေန.ဲ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ထဲမှာ တင်ပြ
ရင် ပိုပြီး သင့်တော်မယ်၊ ခရီးရောက်မယ် တခြားနေရာတွေလမ်းဘေး တွေမှာ Gossip တီးတိုးပြော နောက်ကျော ဒါးနဲ ထိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လွှတ်တော်
အမတ် တယောက်ဟာ အတိုက်အခံဘဲ ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအဖွဲ.ထဲပါရင် ဖြစ်စေ ၊ မပါရင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတိုအကျိုးဌာ.လွှတ်တော်ကိုအကြံ
ကောင်းဥာဏ်ကောင်းတွေ တင်ပြအပ်ပါတယ် ။ လက်သီးပုန်း ထိုးစရာမလိ
ုပါဘူး ၊ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတို.ရန်သူတွေ ရန်ဖက်တွေ မဟုတ်ကြဘူး
ယှဉ်ပြိုင် ဖက်တွေသာ ဖြစ်တယ် ၊။
အတိုက်အခံ ဟာ လက်နက်ကိုင် သူပုန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အစိ်ုးရကိုရန်သူလို.သတ်မှတ်ရင် တော့ အစိုးရကလဲ အတိုက်အခံကိူ ရန်သူလိုသတ်မှတ်လာရင် အပစ်မပြော လေနဲ့ ။ အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ဆိုတာ အဓိပါယ်
တမျိုးပေါက်သွား လိမ့်မယ်။ ကိုယ်က အထက်စီးရမှ ၊ မရရင် အပေါင်းနိုင်ဘူး ၊ နိုင်ငံတော် သမတကြီး ဖြစ်ရမှ သမတ မဖြစ်ရရင်ဘယ်သူ မှ ဘယ်ဟာမှ မတရား ဘူးလို.ဘဲ ပြော နေလို.တော့ မဖြစ်ဘူး။ သမတ ရာထူးမရရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့လဲ ကြေးစားဆန် လွန်း လိမ့်မယ် ၊ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံတော်သားတို.ကို ချစ်တာမဟုတ် ဘူး ၊ စေတနာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကို ကိုယ် အချစ်လွန်နေတာ စေတနာ လွန်နေတာဘဲ။ NLD ဟာ ဒီလိုနဲ့ စားနေတာ များပြီ ။ လူတွေကလဲ တနေ.ထက်တနေ. သိလာပြီ ၊ မကြာခင် စားဘိုးနင့်လိမ့်မှာ ။
တကယ်တော့ မစုကြည်ဟာ စိုင်ကေါ်လို. ခြုံပေါ်ရောက်လာတာ ၊ ဖအေ.နာမည် နဲ. စားနေတာ၊ အဖေ.ကို အလွဲသုံးစားနေတာလို.မြင်တယ် ။ ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး သူသမီးဟာသူ.သမီးဘဲ ၊ ဒါကိုတော့ပြောင်းလဲ လို.မရဘူး။ အင်္ဂလိပ်ထုံးစံ မစ္စစ် အဲရစ် လို.ခေါ်ရင်တောင် ဖအေ့နာမည်လွတ်သွား
မှာကို ကြောက်နေတယ် မဟုတ်လား။ လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ စေတနာ
့ဝန်ထမ်းတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ လစာယူနေကြတာပါ ။
မစုကြည်လို ပုဂိုလ်ဟာ တွေ.ကရာ စကားတွေ လက်လွတ် စပယ် မပြောတာ
ကောင်း ပါ တယ်။ အရာရာကို အဖက်ဖက် ရှုဒေါင်.စုံ ကကြည့်ပြီး ပြောစရာရှိ
ရင် ပြောသင့်ပါတယ် ၊ ပြောလိုက်ရ ရင် ပြီးရော ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး
အာမနာတန်းပြောရမယ် ဆိုရင် (ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကို ကျမ သမတ မဖြစ်မချင်း မလုပ်ကြပါနဲ.အုံး ဆိုင်း ထား ကြပါ) လို. နိုင်ငံတကာလှည့် တီးတိုး
ပြောထားတာတွေ ရှိများ နေသလားလို. စဉ်းစားစရာ? စီးပွားရေးဒဏ် ခတ်မှုရုတ်သိမ်းပေးတာ ချွင်းချက်တွေနဲ့ပါ လို. မစုကြည်ကိုယ်တိုင် O’bama ကိုမီပြီး
ပြုံးဖြဲ ဖြဲ နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ ရုပ်ကို မြင်ယောင်နေသေးတယ် ။
တနည်အားဖြင့်လဲ အခုသိရပြီလေ ရင်းနှီးမှုတွေလိုသလောက်ရောက် မလာ
ကြဘူး ဆိုတာအလေးအနက်ထား မပြောဘဲ ၊ အစိုးရနဲ့ဝန်ကြးဌာန တွေနဲ့ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ရတာ နှေးကွေးတယ် လို. ပြောနေကြတယ် ဆိုပြီး ပြောသွား
တယ် ၊ သူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ သူများတွေပြောတာ ပါပေါ့.လေ။
အရင်တုန်းကလဲ NLD မသိဘဲ ပေးကမ်းထောက်ပံ့တာတွေတောင် မလုပ်ပါနဲ့ လို. ပြောဘူးတယ် ၊ဘာလဲ မလာသူတွေက မြန်မာစီးပွားရေးကို ဒို.မှ မချယ်
လှယ်ရရင် ဒို.မလာဘူးတဲ့ လား? တွေ.ရ မြင်ရတာကို ပြောရရင်. မြန်မာနိုင်ငံ
က ငွေရှင် ကြေးရှင် တချို.ကလဲ ဘာကို မျှော်ကိုးပြီး NLD ပါတီ ရံပုံ တွေ သွန်း လောင်း နေကြသလဲ မသိဘူး ၊ သူတို.အတွက်ကတော ရင်းနှီးမြုတ်နှံ
မှူ တရပ်ဘဲပေါ့ ၊ တရား ၀င် လဘ်ပေး တာ၊ အခွင့်အလမ်း ၀ယ်ယူတာ၊ လက်ဘက်ရည်ဘိုး မုန်.ဘိုးပေးတာ ကြိုက်သလိုသာ ခေါ်တော့၊ တရားဝင် တဲ့ ပေးကမ်းမှုတွေဘဲ. ပြုံးပြီးလက်ခံမယ် ၊ အခန်းအနားနဲ့ လက်ခံမယ်။ မပေးနိုင်ရင် ဂျောင်း ပေါ့.။
ယဉ်စည်းကမ်းဖေါက်တာ ရုံးသွားရရင် သိန်းချီကုန် အလုပ်လဲ တနေ.ပျက်
အုံးမယ်။ လိုင်စင်နဲ့ ကားလဲ သိမ်းခံရအုံးမယ် ၊ ရဲ ကင်း ဘုတ်မှာဘဲ အကူအညီယူလိုက်ရင် ၅ မိနစ်အတွင်း သောင်းဂဏန်းလောက်နဲ့ ပြီးသွားမယ်
ငွေရ ပြေဆာ မလိုဘူး။ နို်င်ငံတော် ဘဏ္ဍာ ယိုပေါက်တွေ။ အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန
တွေဟာ Charity Organization တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ ၊ သူတိုရဲ့ ၀င်ငွေဆိုတာ ဥပဒေရဲ့ ကင်းလွတ်ချက်တွေ ရတယ်၊ အခွန်ဘဏ္ဍာ မပေးရဘူး။ Charity Orgamizatyion တခုဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှတ်ပုံတင်နဲ့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ ပြောဘို.တော့အင်မတန်ခက် တယ် ။ သိန်းပေါင်း
ရာနဲ့ ချီချီပြီး ပေးနေတဲ့ ပါတီရံပုံငွေတွေကိူ တကယ်လိုသာ ငွေရှင်ကြေးရှင် အချင်းချင်း ဖက်စပ် ပူးပေါင်း သမ၀ါယမ အဖြစ်နဲ့စုဆောင်း လိုက်ပြီး လူထု
ကိုလဲ အစုရှယ်ရာတွေ ဝေစုတွေ ခွင့်ပြုပြီး စုပေါင်း လုပ်ငန်းကြီး တွေ တည်
ထောင်လိုက်ကြရင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံမီးရထားဌာနကြီးတခုလုံး၊ ၊ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို. ဆောင် ရေး ၊ လေကြောင်းပို.ဆောင်ရေး ၊ ရေကြောင်းပို.ဆောင်ရေး ၊ လမ်းပန်းဖေါက်လုပ်ရေးနဲ့ ဆောက် လုပ်ရေး အမျိုးမျိုး အပြင် လိုအပ်တဲ့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ ထူထောင်နိုင်မယ် ။ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြရင် ဖြစ်နိုင်တာ တွေ တပုံကြီးပါ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုတာဟာ အကောင်အထည်
ပေါ်လာ မှာပေါ့၊ လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ဘို. နို်င်ငံခြားငွေ ရှိမရှိ ဆိုတာလဲ ပူနေစရာမလိုပါဘူး၊ ပုဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဟာ ဒါလောက်
တော့ လဲ မညံ့ကြပါဘူး။ လျှင် ပါတယ် တတ်နို်ပါတယ် ။
စိတ် စေတသိပ် ၊ စိတ်ရင်းမှန် စေတနာ မှန်နဲ့ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှုတွေကို ပေါ်လွင်စေမှာကတော့ မလွဲ အမှန်ဘဲလို. ဘဲ ပြောခြင်တယ် ။ နိုင်ငံရေးဝါဒ ဖြန်.စည်းရုံးမှု သက်သက် နဲ့ ဂုဏ်တွေ ပကာသနတွေ အတွက် ဓါတ်ပုံတွေ သတင်းစာထဲပါဘို.သာဘဲ ဆိုရင်တော့လဲ ဒီလိုအယောင်ဆောင်မှုတွေဟာ နိုင်ငံတော် နဲ့ နိုင်ငံသားတို.ကို ဘယ်လို မှ အကျိုးပြုနိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး။ မစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာတွေ အားလုံး သိအပ်တဲ့ အသိတရားတွေ ခေါင်းပါး အောင် လုပ်မနေပါနဲ့ လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်မနေပါနဲ့ ။
ဒီနေ. ပြောခြင်တာက မစုကြည် သမတဖြစ်လာရင်တောင် ဖြစ်တာဘဲ အဖတ်တင်မယ် ၊ ဒီယုန်မြင်လို. ဒီခြုံထွင်နေတယ် ဆိုတာလဲ သိတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို လောကနိဗ္ပာန်တခု နတ်ဘုံနတ်နန်း တခုဖြစ် အောင်တောင် ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို. လုံးဝ မယုံကြည်ဘူး။ ။ မစုကြည် ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကို
ကိုယ် ယုံကြည်ရင်လဲ သမတ သက်တမ်း ဘယ်နှတမ်းအတွင်း ဖန်တီးပေးနိုင်
မယ် ဆိုတာ ရဲရဲ ဂတိ ပြုစမ်းပါ ။
ပြောစရာတွေက တော့ အများကြီးရှိပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ တော် လိုက်အုံးမယ် ။